Thailandy: Mpandeha an’arivony voakasiky ny fitokonan’ny fiaran-dalamby · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Mey 2018 5:30 GMT
Vakio amin'ny teny Français, 简体中文, 繁體中文, বাংলা, Español, English
(Marihina fa tamin'ny 27 Jona 2009 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
Mpandeha maherin'ny 200.000 no voakasika tamin'ny fitokonana nanerana ny firenena nandritra ny roa andro, izay notarihin'ny mpiasan'ny Lalambim-pirenena tao Thailandy (SRT). Nanao hetsi-panoherana manohitra ny fanapahan-kevitry ny minisitera ireo mpiasa ireo, izay inoan'izy ireo fa hitarika ho any amin'ny fanaovana ny orinasan'ny lalamby ho tsy miankina amin'ny fanjakana. Nofoanana ny fitokonana ny Talata (23/6) tamin'ny hariva, taorian'ny nanomezan'ny manampahefana toky ireo tompon'andraikitry ny sendikan'ny mpiasa fa tsy hisy ny fanaovana tsy miankina ny orinasa noho ny fandaharan'asan'ny fanavaozana ny lalamby.
Nihevitra ny bilaogy Personal Thailand fa tonga ny fotoana hanatanterahana ny fanavaozana sasantsasany ao amin'ny rafitry ny lalamby Thailandey:
Mitokona ny mpiasa ao amin'ny orinasan-dalamby satria mandà ny fanavaozana natolotry ny governemanta izy ireo, na hoe nandà izany fanavaozana izany ireo manampahefana sendikaly matanjaka indrindra… Aza disoana aho fa tsy tiako ny mahita ny orinasa havadika ho tsy miankina na koa hoe ny fivarotana izany fa hiangaviako aloha ny fananganana ny zotra lalamby vaovao, ny fivarotana ny tany ary atsaharo ny fiantsoana fitokonana raha vao tsy mahazo izay ilainareo ianareo.
Noho ity fitokonana ity , mpandeha an'arivony no voatery nandeha bisy. Anisan'ny niharan'ny olana i Yi Chin:
Mitokona araka izay tiany ireo Thailandey. Nikasa ny handray fiaran-dalamby miala ao Bangkok mankany Kanchanaburi izahay hitsidika ny Lalambin'ny Fahafatesana (Death Railway). Indrisy fa mitokona ny mpiasan'ny gara mba hahazoan'izy ireo fisondrota-karama. Noho izany, tsy maintsy naka bisy izahay.
Fiaran-dalambim-pirenen'i Thailandy. Avy amin'ny pejy Flickr an'i Ian Fuller
Nandinika momba ny lafy ratsy sy ny lafy tsaran'ny famadihana ho tsy miankina amin'ny fanjakana ny orinasan'ny lalamby ho an'i Thailandy i My Thai Friend:
Moa ve ny fanaovana tsy miankina ny SRT hitondra tombontsoa ho an'i Thailandy sy ny fitateram-bahoaka? Etsy an-kilany, mety ho lasa madio sy mahomby kokoa ny tolotra, fa etsy andaniny kosa anefa, tsy maintsy hiakatra ny vidin'ny tapakila. Hitondra fahasahiranana ho an'ireo Thailandey tsy dia manam-bola loatra izay miantehitra amin'ny rafitra misy ankehitriny mba handehanana amin'ny vidiny mora izany sy ho an'ny sasany, izay mandeha maimaim-poana manerana ny firenena.
Nampiseho ny fanadihadiana natao fa tsy faly tamin'ity fitokonana ity ny ankamaroan'ny Thailandey. Ity misy topi-maso momba ireo fanehoan-kevitra momba ny fitokonana tao Bangkok tao amin'ny Twitter :
da_mike : Mila tena fanovana marina ny SRT. Tsy niombon-kevitra tamin'ireo sendikà aho tamin'ity indray mitoraka ity.
siampearl: Fitokonana. Toa, tsy nahazo tombony nandritra ny 10 taona ity sampandraharaham-panjakana ity kanefa mila fisondrota-karama ny mpiasa, mazava ho azy, ny hetrako… eny, tsy misy olana mazava ho azy.
jakeneedham: Misy fitokonan'ny fiaran-dalamby manerana ny firenena, androany, miampy ny fahatezeran'ny mpiasa manohitra ny kabarin'ny lehibeny, mampahatsiahy an'i Etazonia tamin'ny taona 1950 izany.
obruch: Manerana ny firenena, namela ireo fiaran-dalamby teny amin'ny fiantsonana ny fitokonana. Betsaka ny mpandeha nilaha-maina. Miezaka mafy anefa i Thailandy mba hampiroboroboana ny fizahantany …
da_mike: Ireo mpandeha no tokony hitaraina momba ny sendikan'ny lalamby. Tsy ratsy ny fitokonana, saingy tokony hampandrenesina mialoha ny mpandeha.